Imigomo Nemibandela kanye nenqubomgomo yobumfihlo - Ukubalwa kwe-Kingdom
Isivumelwano Mayelana nokusetshenziswa kwale webhusayithi
Le webhusayithi ye-Intanethi ihlinzekwa njengendlela yokuxhumana, imfundo, ugqozi kanye nolwazi. Lesi siza siphethwe futhi sisetshenziswa yi-Countdown to the Kingdom.
Konke okokuqukethwe kule webhusayithi, kufaka phakathi kepha kungagcini lapho, okuqukethwe, ukubhala, izithombe, kanye nekhodi yekhompyutha kanye nokusebenza, kunamalungelo okushicilelwa ngabakwa-Countdown to the Kingdom noma abantu besithathu.
Ungalanda okusetshenziswayo kuleli sayithi ukuze kusetshenziselwe wena uqobo, okungeyona yezentengiso kuphela, uma nje wonke amalungelo obunikazi kanye nezinye izaziso zempahla ehlakaniphile ezihambisana nezinto ezilandiwe zigcinwa. Akukho okunye kulokhu okungagcinwa kukhompyutha ngaphandle kokuthi kusetshenziselwe wena uqobo kanye nokungathengisi ezentengiso.
Awukwazi ukuguqula, ukukopisha, ukukhiqiza kabusha, ukuphinda ugcwalise, ulayishe, uphinde uphinde udlulise, usakaze, usabalalise, uzimele, noma uphinde usebenzise nganoma iyiphi indlela izinto ezivela kule webhusayithi, okufaka, kepha kungagcini lapho, ikhodi, isoftware, umbhalo, izithombe, ama-logo, ividiyo kanye / noma umsindo, ngokusebenzisa noma yikuphi okukhona noma okusazokwakhiwa.
Imikhawulo Ethile Ekusetshenzisweni Kwendaba
Kufanele uhloniphe zonke izimpawu zokuthengisa, amalungelo okushicilela, amamaki wesevisi, ama-logo, namalungelo obunikazi kuyo yonke impahla enobuhlakani kule webhusayithi, noma ngabe lezi zimpawu zokuhweba, ama-copyright, ama-servicemark, ama-logo, kanye namalungelo obunikazi noma amamaki okuka-Countdown to the Kingdom, noma anamalayisense kusuka abantu besithathu. Awungeke usebenzise noma yiluphi lawa malogo, uphawu lwentengiso, ama-servicemark, amalungelo obunikazi, noma okuqukethwe kule webhusayithi ngaphandle kwemvume ebhaliwe ye-Countdown to the Kingdom.
Amalungelo Anikezwe kwiNdlovukazi Yokuthula Media
Uma uthumela noma ufaka imiyalezo, ubeka imibono, imininingwane, kanye / noma iziphakamiso ezihambisana ne-Countdown to the Kingdom noma enye yezinsizakalo zethu noma imikhiqizo, unikeza wonke amalungelo empahla yobunikazi kuleyo mpahla ukuya ku-Downdown to the Kingdom. Izinto ezibonakalayo zizothathwa njengezingekho emthethweni, futhi i-Countdown to the Kingdom ingasebenzisa noma imiphi imibono, amazwana, nempahla enengqondo nganoma iyiphi indlela ekhetha ngayo, kufaka phakathi, kepha kungagcini lapho ukukhiqizwa kabusha, ukudalulwa, nokushicilelwa nganoma iyiphi indlela esekhona manje noma esazokuba ngayo kusungulwe.
Amalungelo anikezwayo ngawobukhosi, obukhona njalo, abunakuqhathaniswa, futhi abunamkhawulo, futhi afaka, kepha akhawulelwe, ilungelo lokuthola ilayisense, ukuthengisa, ilungelo lobunikazi, uphawu lwentengiso, i-servicemark, kanye nelungelo lobunikazi.
Ubumfihlo Nenqubomgomo yohlu
Uma uhlinzeka nge-Countdown eMbusweni ngekheli lakho le-imeyili ukuze ubhalisele i-Countdown kwiphepha lezindaba loMbuso, i-Countdown to the Kingdom izosebenzisa i-imeyili yakho kuphela ekukuthumelela yona incwadi yezindaba. Umgomo we-Countdown to the Kingdom akukhona ukunikeza ikheli lakho le-imeyili noma imininingwane kunoma ngubani ovela eceleni.
I -downdown to the Kingdom inganikeza izixhumanisi kumawebhusayithi aphuma eceleni, noma yisho amawebhusayithi e-Intanethi agcinwa ngabantu besithathu. Uma usebenzisa le webhusayithi noma iyiphi iwebhusayithi exhunywe noma okukhulunywe ngayo kule webhusayithi, uyenza ngengozi yakho. I-Countdown to the Kingdom ayisebenzi noma ayilawuli lezi zingosi ezivela eceleni, futhi ngakho-ke ayenzi iwaranti, ekhonjisiwe noma iveziwe, nganoma yiziphi izinto ezitholakala kulawa masayithi avela eceleni.
Ukwehla uMbuso akuqinisekisi ukuthi le webhusayithi, izakhi zayo, noma imisebenzi yayo kuzobe kungaphazanyiswa noma kungenaphutha. Ukuwehlela eMbusweni akuqinisekisi ukuthi le webhusayithi noma iyiphi iwebhusayithi exhunywe kule webhusayithi noma okukhulunywe ngayo kule webhusayithi ayinama-virus noma ezinye izinto eziyingozi.
Akunakuphikwa ukuthi abaxhumene nabo be-Countdown to the Kingdom, noma omunye umuntu osize ukudala, ukukhiqiza, ukuletha, noma ukusebenzisa le webhusayithi, kufanele abhekane nomonakalo owenziwe ngokuqondile, ngokungaqondile, ngesehlakalo, okhethekile, noma ngokulandelana okuvela ekusebenziseni ye, noma ukungakwazi ukusebenzisa i-Countdown kuwebhusayithi yoMbuso noma izingxenye zayo, nganoma yisiphi isizathu, kufaka phakathi ukunganaki. Ngokusebenzisa le webhusayithi uvuma ngokuqondile futhi uyavuma ukuthi i-Countdown to the Kingdom ayibophezelekile kunoma yikuphi ukuziphatha kunoma imuphi umsebenzisi. Ngokusebenzisa le webhusayithi uyavuma futhi uyavumelana nayo yonke imigomo yalesi Sivumelwano.
Uma noma yikuphi ukuhlinzekelwa kwalesi Sivumelwano kubanjwa kungafanele, lokho kungasebenzi ngeke kuthinte lezo zinhlinzeko ezinganikezwa ngaphandle kwaleyo ngxenye engalungile.
Lesi Sivumelwano kufanele silawulwe futhi sigcwaliswe ngokwemithetho Yezwe laseCalifornia, futhi indawo yanoma isiphi isizathu sokuthathwa kwezinyathelo izoba seSacramento County, California.